Junior Win (ဂျူနီယာဝင်း) : February 2008
တပို့တွဲလဖွား ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်
၁၉၀၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဖွား ကဗျာဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်
ရန်ကုန်တိုင်းကွမ်းခြံကုန်းမြို့တွင်အဖကုန်သည်ဦးလွမ်းပင် အမိ ဒေါ်မိ
တို့မှမွေးဖွားခဲ့ရာမွေးချင်း ၇ ယောက်တွင်ဒုတိယဖြစ်သည်။မွန်မြန်မာမျိူးရိုးဖြစ်ကာ
ဆရာကြီးသည် ၁၉၃၃ တွင်ဝဇ္ဖာဂုဏ်ထူးတန်းကိုမြန်မာစာပထမအဆင့်ဖြင့်အောင်၊
၁၉၅၃ တွင်မဟာဝိဇ္ဖာမြန် မာစာဂဲုဏ်ထူးတန်းကိုဒုတ်ိယအဆင့်ဖြင့်အောင်၊
၁၉၃၈ တွင်လန်ဒန်တက္ကသိုလ်အရှေ့တိုင်းနှင့် အာဖရိကဘာသာရပ်များလေ့လာရေး ကျောင်းတွင်ပညာသင်၊၁၉၃၉ တွင်အောက်စဖို့တက္ကသိုလ်မှစာပေ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့ပါသည်။
ကဗျာ၏အမည်က မိုးရာသီဘွဲ့ လေးဆစ်သဖြန် တဲ့။
ထင်ရှားသောစာအုပ်များမှာ ၁၉၄၀ မောင်ခွေးဖို့ကဗျာ၊၁၉၄၁ သပြေညိုနှင့်အခြားကဗျာ၊
၁၉၄၈ စာပေလောက(ဇော်ဂျီနှင့်တွဲ)၊၁၉၅၂-၆၄ မြန်မာအဘိဓာန်(၅ ပိုင်း)၊
၁၉၅၅ သုံးပွင့်ဆိုင်ခေတ်စမ်းစာပေ(သိပ္ပံမောင်ဝ ဇော်ဂျီ တို့နှင့်တွဲ)၊၁၉၆၃ ကဗျာပရိ ယာယ်(မင်းယုဝေ နှင့်တွဲ)၊ ၁၉၇၀ ရေချမ်းစင်၊၁၉၇၄ အင်းယားကန်သို့ အို ကူးတို့၊
၁၉၈၄ လီယာမင်းကြီး စသည်မျှမကရှိပါသည်။(၂၀ရာစုမြန်မာစာရေးဆရာ၁၀၀၊
နှင့်မင်းသုဝဏ် ကဗျာပေါင်းချူပ်စာအုပ်များမှ အချက်အလက်များကိုရယူပါသည်)
ဆရာကြီးသည် ၁၉၈၄တွင် လီယာမင်းကြီး စာအုပ်ဖြင့်အမျိူးသားစာပေဆုကို၎င်း၊ ၁၉၅၀တွင် ၀ဏ္ဏကျော်ထင် ၊၁၉၆၂တွင် သီရိပျံချီ ဘွဲ့များရရှိခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်နေအိမ်၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
၁၉၃၅ ခုနှစ်က ဆရာကြီး ၏ကဗျာကိုအလွမ်းပြေတင်ဆက်လိုက်ရပါသည်။
စာဆိုကို နှူတ်ချိူ “သ“ လေပေါ့
Posted by Junior Win at 7:35 AM No comments:
ပန်းချီဆရာကြီးဦးဘကြည် ၏ ထမနဲ လဘွဲ့ ပန်းချီကား
လတပို့တွဲ တမနဲ ထိုးမြဲအစဉ်လာ။
PREPARATION OF Hta-ma-ne (Glutinous Rice) for alms-giving
Come Tapoutwe , the eleventh month of the myanmar calendar, the myanmar have the harvest festival. All the products of the farm and garden are made into htamane,aformulation of glutinous rice, coconut slices, sessamum seeds , peanuts andagenerous amount of cooking oil. Htamane feast is either celebrated communally or done in the private circle of family and friends.
Posted by Junior Win at 6:16 AM No comments:
Posted by Junior Win at 5:32 AM No comments:
Posted by Junior Win at 6:22 AM No comments:
ဂျူနီယာဝင်း ရေးသားသော ”အရင်ဦးဆုံးအဖြစ်များ” အတွေးအမြင်ဆောင်းပါး ထဲမှ
စာစဉ် ၁၆၉ တွင် ပါရှိသော ဗယ်လန်တိုင်း Valentine နေ့အကြောင်းကို
သူတော်စင် Valentine သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးကြောင့်အင်ပါယာအရှင်
Claudres2လက်ထက်တွင်အသက်ပေးခဲ့ရသည်ကိုအကြောင်းပြု၍ထိုနွေဦးရာသီ ရောက်တိုင်းရောမရိုးရာစားသောက်ပွဲများကျင်းပခဲ့သည်မှစသည်ဟုဆုိပါသည်။
ထဖန် AD 270 ကာလတုန်းကအမည်တူသူတော်စင်နှစ်ဦး၏အမည်ကိုကိုယ်စား
Flaminaway တွင်အရှင်သခင်Claudius လက်ထက်
ဦးမှ interamma (termi)ခရစ်ယာန်ဂုဏ်းအုပ်ဆရာဖြစ်ပြီးရောမမြို့တွင်ခရစ်ယာန် ဘာသာယုံကြည်မူကြောင့်အသက်ခံခဲ့ရသူဖြစ်၏။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့သောနေ့က
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။သူတော်စင် valentine နှစ်ဦးအမှတ်တရ အဖြစ်ထိုမှစတင်ခဲ့သည်ဟုဆ်ိုပါသည်။
ရောမရိုးရာစားသောက်ပွဲကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပရာမှသူတော်စင်valentine ဟု လူသိလာကြပါသည်။
ဗြိတိသျှပြတိုက်တစ်ခုတွင်duke of orlean က၁၄၁၅-ခုနှစ်လန်ဒန်မျှော်စင်တွင် အကျဉ်းချခံရစဉ်ကပေးပို့ခဲ့သောvalintineပို့စကပ်များရှိသည်။
mr Samuel Prpys၏မှတ်တမ်းစာအုပ်ထဲတွင်yorkမြို့စားကlady arabelle
atuart ကိုvalentine လက်ဆောင်အဖြစ်လက်စွပ်တစ်ကွင်းပေးခဲ့သည်ဟုရေး
မှတ်ထားသည်။mr pepys သည် sir williwm pattern ထံမှ valentine လက်ဆောင်အဖြစ်လက်အိတ်များ၊ခြေအ်ိတ်များ၊ခြေစွပ်များရရှိခဲ့သည်ဟုဆိုပါသည်။
rowland hillကစာပို့ခကြိုတင်ပေးရသောစနစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ ပစ္စည်းရရှိသူကစာအတွက်ပေးပို့ခကိုပေးရမည် သို့မဟုတ် စာကိုလက်ခံဖို့ငြင်းရ မည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။
(မိန်းခလေးတစ်ယောက်သည် သိချင်စိတ် စိတ်ဝင်စားမည့်valentine အမှတ်တရဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်)
မိန်းခလေးတစ်ယောက်သည်ဤစာသည်သူမ သိချင်စိတ် စိတ်ဝင်စားမည့်
valentine အမှတ်တရဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မည်။သူမကို လိမ်လည် နောက်ပြောင်ကြံစည်ပေးပို့သောစာများလည်းဤနည်းဖြင့်ရောက်လာနိုင်လေသည်။
အခုတော့ထိုvalentineကပြန်လည်အသက်ဝင်လာရပြန်လေပြီ။valentine ကဒ်ကိုခင်မင်သူ၊ကတ်ပေးပို့ခြင်း၊ချစ်သူအမှတ်တရပွဲတို့သည်သူတော်စင် valentine နှင့်ပတ်သက်ခြင်းလုံးဝမရှိဟုလည်းကောင်း၊သူတို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည် တို့နှင့်ဘယ်လိုမှမသက်ဆုိင်ဟုလည်းကောင်းဆိုကြပါသည်။ သို့ရာတွင်အမည်တူ၊
ရည်ရွယ်ချက်တူ၊ သူတော်စင်နှစ်ဦကောင်းကင်ရံမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြသည့်အမှတ်တရ အဖြစ်ဟုလက်ခံလိုက်လျှင်တော့အဓိပ္ပါယ်တွေရှိနေပါသည်။
Posted by Junior Win at 5:44 AM No comments: